Wixii talo ah u sheeg Jama Musse Jama
Somali- Italian-English Online Mathematical Dictionary
NEW ONLINE DICTIONARY WITH SOMALI DEFINITIONS
Hirgalintii Gateway-gan waxa gacan wayn ka gaystay koox arday ah oo wax ka barta Waaxda Xisaabta ee Jaamacadda Pisa. Qaamuuskan kuma dhamma eraybixintii sayniska iyo xisaabta midkoodna, laakiin hindisahayagu waa inaan isku dayno inaanu ururino intii karaankayaga ah sidii aanu u hir galin lahayn goob loogu soo hagaago eraybixintaas. Sidaa darteed talo iyo tusaaleba waanu soo dhawaynaynaa.
Sheeg erayga aad rabto dabadeedna clik-garee Raadi
Sida laga yaabo inaad la socoto, luuqadda Af-Soomaaliga waxa la qoray 1972-kii. Inkasta oo ay Somalia ka mid ahayd dawladihii yaraa ee Afrika ee sida geesinimadu ku jirtay ugu dhawaaqay in la hir galiyo luuqadooda ayaa hadana waxa wax lagu faano ah in eraybixintii la sameeyay ammintaasi ay noqotay mid guul lama filaan ah laga gaadhay. Guddigii eraybixintu waxa ay qabteen howl laxaad badan isla markaan aad u qiimo iyo sharaf badan. Si kastaba ha ahaatee howshaas waxaad moodaa in laga seexaday sii horumarinteeda. Nin la sugayow adna yaad sugi!. Waxaynu ka bilaabaynaa halka ku dhaafeen kuwii inaga horeeyay.
Iskuday adiguna inaad ka qaybqaadato. Talo iyo tacabba waa loo baahanyahay. Waanu soo dhawaynaynaa cidii wax nagu kordhinaysa. Hadaanu khalad galnana gacmofurna baan kusoo dhawaynanaa ciddii na saxaysa. Qoreyaasha qaamuuska.
ku noqo bogga Jama
ku noqo bogga Qaamuuska.
ku noqo bogga alif la kordhebay
Wixii talo iyo tusaalo ah Jama Musse Jama